Ihe ị ga-ahụ na Shanghai | Akụkọ Njem
Otu n'ime njem kachasị atọ ụtọ anyị nwere ike ịme na Eshia bụ nleta China nyere ọdịiche dị n'etiti West na East. Obodo a buru ibu nke na ọ na-enye ndị njem nleta ọtụtụ ohere, site na ndị na-achọ njem na inwe mmekọrịta na okike, ndị na-ahọrọ nleta ọdịbendị ma ọ bụ nke afọ.
Na ndagwurugwu nke Osimiri Yangtze a na-akọ akụkọ ifo, otu n’ime obodo ndị mmadụ kacha biri n’ụwa dị: Shanghai, nke ghọgoro akara ngosi obodo obodo nke ọganihu na teknụzụ na akụ na ụba China.
Ọ bụrụ n ’ị na-eche echiche ị ga njem Shanghai n’oge ọkọchị a, lee ihe ndị kachasị mma ị ga-ahụ ma mee oge ịnọ.
3 Ahịa Jiashan
4 Nkeji French
5 Ochie Obodo
6 Ndị ọzọ na Shanghai
7 Museumlọ ihe nkiri Shanghai
Na Bund bụ otu n'ime ebe kachasị mma nke obodo a. N'ime ya anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ nnọchi anya nke oge ọchịchị nwere ụdị Europe na-akpọ gị oku ka ị gaa ogologo ije n'akụkụ Osimiri Huangpu.
N'etiti ndị njem nleta, ụgbọ mmiri na-achọsi ike ma hụ mpaghara a n'abalị bụ ihe ngosi nke agba na ọkụ.
Na mgbakwunye, site n'akụkụ a nke ụsọ mmiri ahụ enwere echiche panoramic mara mma nke mpaghara ego Pudong ya na mbara igwe ya ama ama jupụtara na skyscrapers.
Pudong bụ otu n'ime ụlọ ọrụ akụ na ụba kachasị mkpa na China na mpaghara mpaghara ego Shanghai, nke e wuru n'ime afọ iri abụọ gara aga na-ele anya n'ọdịnihu.
Nke a bụ Shanghai Worl Financial Center na ama Jinmao Tower, abụọ nke 10 tallest ụlọ n'ụwa. Anaghị ahụkwa Towerlọ Elu Ọwụwa Anyanwụ arlwa n’ihi ọdịdị ya na-enweghị mgbagha. Nwere ike iji oge ị gara Pudong gbagoro ụfọdụ n’ime ha wee see foto.
Ahịa Jiashan bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịhụ na Shanghai. Nke a bụ ahịa nri ikuku n'èzí nke na-achịkọta ụlọ ahịa nke ihe dị ka ndị ahịa iri atọ ma were ya dị ka otu n'ime ahịa kachasị mma n'obodo ahụ n'ihi ogo ngwaahịa ya.
A mara ahịa a site na ikuku dị mma. Notgaghị enwe ike ịnwale ụdị nri ọ bụla kamakwa ịnwe obere obere egwu a na-ahazi mgbe niile ma ọ bụ ọrụ aka, onye mmebe na ịkọ ugbo.
A na-emeghe Ahịa Jiashan ụbọchị Satọde ọ bụla na nke atọ n'ime ọnwa kemgbe 2012.
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ, n'etiti 1849 na 1946 mpaghara a nke Shanghai dị n'okpuru French ma mara ya dị ka Paris nke East. Taa ọ ka na-enwe njigide nke European ma bụrụ ebe na-adọrọ mmasị iji nwee ọmarịcha nri Western na ịga ahịa.
N'akụkụ a nke Shanghai, ị nwekwara ike ịga na Fuixing Park (ebe dị jụụ, nke dị ọcha nke jupụtara na isi iyi) na ụlọ ebe Communist Party nke China bilitere, taa ghọrọ ụlọ ngosi ihe nka.
A ezi ụzọ mara Shanghai si French nkeji iri na ise bụ ịgbazite igwe kwụ otu ebe site na otu nke ụlọ ọrụ ndị na-ebu ahaziri njegharị nke obodo na-eje ije n'okporo ámá na-ele ndị European-style ụlọ ndị ka na-eguzo.
Kemgbe ihe karịrị narị afọ isii nke akụkọ ntolite, ndị njem nleta ga-ahụ ihe kacha mkpa China kachasị na mpaghara ochie nke Shanghai.
Old City bụ ebe akwụ ụgwọ maka ndị niile chọrọ ịchọpụta Shanghai kachasị mma ma nwee echiche banyere ebe ebe a dị ka ọtụtụ narị afọ gara aga.
A na-atụ aro ya karịsịa ileta ubi Yuyuan, ubi nkeonwe wuru na 1559 yana ahịa ndị njem na-esote ya. Na agbata obi enwere ụfọdụ ụlọ nsọ dịka thelọ Nsọ nke Chi Ndị Obodo na ọbụna ụlọ alakụba, ụlọ alakụba Xiaotayuan.
Ndị ọzọ na Shanghai
Ekwuru na Shanghai nwere ndụ abalị kacha mma na China n'ihi na ọ bụ obodo ebe enwere ọtụtụ ihe. Obodo ahụ nwere ọtụtụ ebe ebe ndụ abalị na-atọ ụtọ na ọtụtụ diski na ogwe karaoke dịka Nanjing Street, Huahai Street ma ọ bụ Lujiazui Ring Street.
Museumlọ ihe nkiri Shanghai
Ọ bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa na China n'ihi nchịkọta ya bara uru nke mejupụtara site na oge dị iche iche akụkọ ihe mere eme.
Emepụtara Shanghai Museum na etiti narị afọ nke 120.000 iji gosipụta nchịkọta nke ihe karịrị iberibe 8.000, gụnyere ọla kọpa na seramiiki, arịa ụlọ, mkpụrụ ego na stampụ site na oge gafere afọ XNUMX.
Ọnụ ụzọ ụlọ ebe a na-edebe ihe ngosi anaghị akwụ ụgwọ, yabụ na ọ bara uru ileta. Ha na-emeghe ọnụ ụzọ ha kwa ụbọchị n’agbata elekere itoolu nke ụtụtụ. na 9h.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Ihe ị ga-ahụ na Shanghai